Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalàm-pifidianana : Antoko vitsivitsy mangataka fanitsiana
Lalàm-pifidianana : Antoko vitsivitsy mangataka fanitsiana
Zavatra tsy mahagaga eto amintsika ny fitakiana amin’ny tokony hanovana na hanitsiana ny lalàm-pifidianana. Ny zavatra hita hatramin’izay, dia ireo antoko politika manohitra ny fitondrana mijoro foana no manao an’io fitakiana io fa tsy ny antokom-panjakana. Omaly dia antoko efatra no tonga teny amin’ny Antenimieram-pirenena, nanatitra karazana fehin-kevitra entina manitsy ny lalàna mifehy ny fifidianana eto amintsika, tsy iza izany fa ny Antoko politika madio (APM), ny Roso ho an’ny demokrasia Sosialy (RDS), ny Humaniste Ecologique Madagasikara ary ny antoko Otrikafo.
Maromaro ny teboka mila hasiam-panovana amin’ny fifidianana eto amintsika raha ny soson-kevitra naroson’ireto antoko madinika ireto. Voalohany amin’izany ohatra ny tokony hamaritana mazava ny tetiandro-pifidianana eto amin’ny firenena, manomboka any amin’ny fifidianana filoham-pokontany ka hatrany amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Toa ny any amin’ny firenen-dehibe, vao manomboka ny fotoam-piasan’ny filoha iray dia efa fantatra avokoa ny daty hanaovana ny fifidianana satria efa voafaritra mazava ao anatin’ny lalàna.
Soson-kevitra naroson’ireto antoko politika ireto koa ny tokony hametrahana fitsarana manokana ho an’ny fifidianana fotsiny, ny fanalavana ny fe-potoana afahana manao fampielezan-kevitra ary ny fanovana ho nomerika (numérisation) ny lisi-pifidianana asiam-panavaozana isan-taona. Mazava ho azy fa ny tanjona amin’izany dia ny hisorohana ny disadisa na ny korontana rehefa misy fifidianana tanterahina eto amin’ny firenena, indrindra fa ny fifidianana filohan’ny repoblika. Ireo no teboka lehibe amin’ny soson-kevitra naroson’izy ireo teny amin’ny Antenimierampirenena, fa tsara ihany anefa ny manamarika fa misy hery politika hafa maromaro koa no mihevitra fa tokony hapetraka ny lalàna mametra ny tetibola entin’ireo kandidà mihatrika ny fifidianana. Noho ny tsy fisian’io lalàna io mantsy dia izay kandidà na antoko manam-bola ihany no mahazo manantena ny ho lany amin’ny fifidianana, na fifidianana filoha na solombavambahoaka na ben’ny tanàna.